အလုပ်ကိစ္စတွေနဲ့ ခရီးသွားနေရရင်းတောင် ရောက် ရာအရပ်မှာ ဖခင်ကြီးအတွက် ကောင်းမှုတွေပြုလုပ် ပေးခဲ့တဲ့ ရွှေရည်သိန်းတန် – XB Media & News
အလုပ်ကိစ္စတွေနဲ့ ခရီးသွားနေရရင်းတောင် ရောက် ရာအရပ်မှာ ဖခင်ကြီးအတွက် ကောင်းမှုတွေပြုလုပ် ပေးခဲ့တဲ့ ရွှေရည်သိန်းတန်
January 11, 2022 Bestie_Author Cele News 0
ပရိသတ်ကြီးရေ ရွှေရည်သိန်းတန်ကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်တော် ဂန္တဝင်အဆိုတော်ကြီး တွံတေးသိန်းတန်ရဲ့ သမီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့ ဇန်နဝါရီလ (၁၁)ရက်နေ့မှာတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်တော် ဂန္တဝင်အဆိုတော်ကြီး တွံတေးသိန်းတန်ကွယ်လွန်သွားတာ (၂၃)နှစ်ပြည့် မြောက်တဲ့ နေ့ရက်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။
သမီးဖြစ်သူရွှေရည်သိန်းတန်ကတော့ ဖခင်ကြီး(၂၃)နှစ်ပြည့်နှစ်ပတ်လည်ဖြစ်တဲ့ ဒီနေ့လေးမှာ သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေ ဖခင်ကြီး ကို လွမ်းဆွတ်တမ်းတနေကြောင်း အခုလိုပဲရင်ဖွင့်လာခဲ့ပါတယ်။”ဖေဖေ (၂၃) နှစ်ပြည့်ပြီတဲ့။တစ်နေ့မှမမေ့သလို..ပူလောင်မှု တွေကြုံလာ တိုင်း မျက်ရည်တွေကျရတိုင်းအကြိမ်ကြိမ် လဲပြိုရတိုင်း ဖေဖေပေးတဲ့စိတ်ခွန်အားတွေနှင့်အကြိမ်ကြိမ်တည့်မတ်..ရုန်းထဖြတ် ကျော်လာခဲ့ ရတာ လည်း (၂၃)နှစ်ပြည့်ပြီပေါ့ဖေဖေရယ်.
.သမီးနှင့် အဖေက လက္ခဏာရော.ဇာတာပါတူတယ်..သမီးနာမည်အနောက်မှာ မင်းနာမည်ပါရင်.သူ့ဘဝ ကြမ်းလိမ့်မယ်လို့ရွှေပေါ် ကျွန်း ဆရာတော်ကြီဘုရားကြီးမိန့်ခဲ့တုန်းကအဖေရော သမီးပါ ခေါင်းမာမာနှင့် မှတ်ပုံတင်ထဲအထိရွှေရည်သိန်းတန် လို့အဖေနာမည်ပေးခဲ့တာကို အမြဲသတိရတယ်ဖေဖေ..
သမီးပျော်တယ်..ဘာလောကဓံကြုံကြုံ သမီးကျေနပ်တယ်..ဖေဖေ့သမီးဖြစ်ရတာ.ဂုဏ်ယူတယ် ..ဖေဖေ.. ခေါင်း မာတာရော..ဘဝနာတာရော..ဘာတွေတူရတူရဖေဖေနှင့်သာတူရမယ်ဆို….ဒီနာမည်လေးကိုတသက်လုံးတမြတ်တနိုးနှင့် သေသည်အထိ သမီးအရာရာကို အကောင်းဆုံး ဖြတ်ကျော်ပြသွားမယ်..ဖေဖေက သမီးအတွက် တဘဝစာ လမ်းပြခဲ့သူ..HERO ကြီးပါဖေဖေရယ်”ဆိုပြီး ရင်ဖွင့်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ရွှေရည်သိန်းတန်ကတော့ အလုပ်ကိစ္စနဲ့ ခရီးသွားနေရပေမဲ့ ဒီနေ့ ဖခင်ကြီးရဲ့ (၂၃)နှစ်ပြည့်နေ့ရက်လေးကိုတော့ သူရောက်ရာအရပ်မှာ ဖခင်ကြီးကိုရည်စူးပြီး ဘုရားသွားကောင်းမှုပြုလုပ်ပေးသွားမှာပါတဲ့။ CeleZone ပရိသတ်ကြီးရေ ရွှေရည်သိန်းတန်လို သမီးမျိုးရရှိထားတာကတော့ ဦးသိန်းတန်အတွက် တကယ်ကို ဂုဏ်ယူစရာပါပဲနော်။
ပရိသတ္ႀကီးေရ ေ႐ႊရည္သိန္းတန္ကေတာ့ ပရိသတ္ေတြရဲ႕အခ်စ္ေတာ္ ဂႏၲဝင္အဆိုေတာ္ႀကီး တြံေတးသိန္းတန္ရဲ႕ သမီးပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေန႔ ဇန္နဝါရီလ (၁၁)ရက္ေန႔မွာေတာ့ ပရိသတ္ေတြရဲ႕အခ်စ္ေတာ္ ဂႏၲဝင္အဆိုေတာ္ႀကီး တြံေတးသိန္းတန္ကြယ္လြန္သြားတာ (၂၃)ႏွစ္ျပည့္ ေျမာက္တဲ့ ေန႔ရက္ေလးပဲျဖစ္ပါတယ္။
သမီးျဖစ္သူေ႐ႊရည္သိန္းတန္ကေတာ့ ဖခင္ႀကီး(၂၃)ႏွစ္ျပည့္ႏွစ္ပတ္လည္ျဖစ္တဲ့ ဒီေန႔ေလးမွာ သူ႔ရဲ႕လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာကေန ဖခင္ႀကီး ကို လြမ္းဆြတ္တမ္းတေနေၾကာင္း အခုလိုပဲရင္ဖြင့္လာခဲ့ပါတယ္။”ေဖေဖ (၂၃) ႏွစ္ျပည့္ၿပီတဲ့။တစ္ေန႔မွမေမ့သလို..ပူေလာင္မႈ ေတြႀကဳံလာ တိုင္း မ်က္ရည္ေတြက်ရတိုင္းအႀကိမ္ႀကိမ္ လဲၿပိဳရတိုင္း ေဖေဖေပးတဲ့စိတ္ခြန္အားေတြႏွင့္အႀကိမ္ႀကိမ္တည့္မတ္..႐ုန္းထျဖတ္ ေက်ာ္လာခဲ့ ရတာ လည္း (၂၃)ႏွစ္ျပည့္ၿပီေပါ့ေဖေဖရယ္.
.သမီးႏွင့္ အေဖက လကၡဏာေရာ.ဇာတာပါတူတယ္..သမီးနာမည္အေနာက္မွာ မင္းနာမည္ပါရင္.သူ႔ဘဝ ၾကမ္းလိမ့္မယ္လို႔ေ႐ႊေပၚ ကြၽန္း ဆရာေတာ္ႀကီဘုရားႀကီးမိန႔္ခဲ့တုန္းကအေဖေရာ သမီးပါ ေခါင္းမာမာႏွင့္ မွတ္ပုံတင္ထဲအထိေ႐ႊရည္သိန္းတန္ လို႔အေဖနာမည္ေပးခဲ့တာကို အၿမဲသတိရတယ္ေဖေဖ..
သမီးေပ်ာ္တယ္..ဘာေလာကဓံႀကဳံႀကဳံ သမီးေက်နပ္တယ္..ေဖေဖ့သမီးျဖစ္ရတာ.ဂုဏ္ယူတယ္ ..ေဖေဖ.. ေခါင္း မာတာေရာ..ဘဝနာတာေရာ..ဘာေတြတူရတူရေဖေဖႏွင့္သာတူရမယ္ဆို….ဒီနာမည္ေလးကိုတသက္လုံးတျမတ္တႏိုးႏွင့္ ေသသည္အထိ သမီးအရာရာကို အေကာင္းဆုံး ျဖတ္ေက်ာ္ျပသြားမယ္..ေဖေဖက သမီးအတြက္ တဘဝစာ လမ္းျပခဲ့သူ..HERO ႀကီးပါေဖေဖရယ္”ဆိုၿပီး ရင္ဖြင့္လာခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။
ေ႐ႊရည္သိန္းတန္ကေတာ့ အလုပ္ကိစၥနဲ႔ ခရီးသြားေနရေပမဲ့ ဒီေန႔ ဖခင္ႀကီးရဲ႕ (၂၃)ႏွစ္ျပည့္ေန႔ရက္ေလးကိုေတာ့ သူေရာက္ရာအရပ္မွာ ဖခင္ႀကီးကိုရည္စူးၿပီး ဘုရားသြားေကာင္းမႈျပဳလုပ္ေပးသြားမွာပါတဲ့။ CeleZone ပရိသတ္ႀကီးေရ ေ႐ႊရည္သိန္းတန္လို သမီးမ်ိဳးရရွိထားတာကေတာ့ ဦးသိန္းတန္အတြက္ တကယ္ကို ဂုဏ္ယူစရာပါပဲေနာ္။
(၇) ရက်သားသမီး ပြည်သူများအတွက် ဘုရားမှာ ကုသိုလ် ကောင်းမှု များစွာ ပြုလုပ်ရင်း ဆုတောင်း ခြင်းတွေ ပြုလုပ်ပေးခဲ့တဲ့ မေလသံစဉ်
ရွှေကမ္ဘာလုံးဆုပေးပွဲရဲ့ အကောင်းဆုံးဇာတ်ပို့သရုပ် ဆောင်ဆုကိုရရှိတဲ့ ပထမဆုံးကိုရီးယားသရုပ်ဆောင် ဖြစ်လာတဲ့ Oh Young Soo